नबिल बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २३ असार २०७६)
बैंकको ९० लाख कित्ता संस्थापक शेयर साधारणमा परिवर्तन भएको छ । हाल बैंकको शेयर स्वामित्व संस्थापकतर्फ ६० र साधारणतर्फ ४० प्रतिशत कायम छ । यस बैंकले तत्कालीन एनआईसीडी डेभलपमेन्ट बैंकले विक्री गरेको १० प्रतिशत संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयरमा रूपान्तरण गरेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी रू. ९ अर्ब १ करोड छ । बैंकले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीलाई १२ प्रतिशत बोनस शेयर र २२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरिसकेको छ । आइतवार बैंकको शेयरमूल्य रू. ७९० कायम छ । यो अघिल्लो दिनको तुलनामा ८ अंक कम हो । आइतवार बैंकको ६ हजार ४८१ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
कम्पनीको ६२ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा सानो टुप्पी भएको कालो मैनबत्ती बनेको छ ।
2019-07-08 - 147 view(s) - abhiyan